ခက်မာ: ကွဲပြားခြင်းတွေထဲက ဆင်တူသော တထပ်ထဲကျမှု 1. 2.
ကွဲပြားခြင်းတွေထဲက ဆင်တူသော တထပ်ထဲကျမှု
မြန်မာပြည်က နာဂစ်ဆိုက်ကလုံးကြောင့် ဆုံးရှုံးရတဲ့ အပျက်အစီး
ကျမရဲ့ခရီးသွားဖော်သူငယ်ချင်း ဆာရာယေဗိုကကဗျာဆရာမနဲ့ဂျာနယ်လစ်အဒစ်ဆာ ( Adisa Basic) က ကျမကိုမေးတယ်။“အမေရိကားမှာဘယ်လိုအရာတွေကမင်းရဲ့မိခင်မြေကိုလွမ်းaအာင် အလုပ်နိုင်ဆုံးလဲ”တဲ့။ကျမကချက်ခြင်းပဲတုန့်ပြန်မိပါတယ်။“မြင်သမျှအရာအားလုံးပါပဲ” လို့။
တကယ်ပါ။ အမေရိကားဟာ နေ့စဉ်ကိစ္စတွေမှာ လူတွေကိုအင်မတန်လွယ်ကူ သက်သာစွာဖြတ်သန်း နေထိုင်နိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ကျမရဲ့မိခင်မြေမှာ နာရီပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းပြီး ပင်ပန်းကြီးစွာလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကို ခလုပ်လေးတစ် ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ပြီးမြောက်စေပါတယ်။အဲဒီလိုရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းအရတိုးတက်မှုတွေနဲ့လွယ်ကူ
စေတာကိုမြင်ရတိုင်း ပင်ပန်းတကြီးရှင်သန်ကြရတဲ့ ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုသတိရမိပါ တယ်။ တဦးကိုတဦးလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့ ဒီကလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့် အတန်းမြင့်မှုတွေကို မြင်ပြန်တော့လည်းပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ ရပ်တည်ရှင်သန်ရမှုကြောင့် တဦးကိုတဦးမုဒိတာမထားနှိုင်ကြတော့ရှာတဲ့ ကျမတို့ပြည်သူတွေအကြောင်းကခေါင်း ထဲရောက်လာမိပြန်တာပါပဲ။ ဒူးလောက်ပေါင်လောက်မြင့်တဲ့နှင်းထုတွေကြားမှာဖြတ် သန်းရင်း ခြေလက်တွေကခံစားမှုကင်းမဲ့တော့မတတ်အေးခဲထုံကျင်နေချိန်မျိုးမှာတော့ အသားတွေလောင်မတတ်ပူပြင်းတဲ့ မိခင်မြေဆီအတွေးရောက်ရပြန်ပါရော။ များသော အားဖြင့် ကျမရဲ့မိခင်မြေအလွမ်းတွေဟာ ကျမကြီးပြင်းခဲ့ရာနိုင်ငံနဲ့မတူတာတွေအပေါ် အခြေခံတတ်ပါတယ်။
နယူးအော်လန်းကတော့ဖြင့် ကျမကိုလွမ်းနေကျနဲ့ကွဲပြားစွာလွမ်းစေပါတယ်။ စိမ်းစိုတဲ့သစ်ပင်တွေအုံ့ဆိုင်းနေတာ၊ နဖူးနဲ့လည်ပင်းကစီးကျလာတဲ့ချွေးတွေကိုသုတ် ရင်းလမ်းသွားရတာက မြန်မာပြည်အတိုင်းပါပဲ။ နယူးအော်လန်းမှာမြင်ရတဲ့ပန်းပင်နွယ် ၀င်အပင်တော်တော်များများကလည်းမြန်မာပြည်မှာမြင်ရတဲ့အပင်တွေပါ။ ဖွေးဖွေးလှုပ်
မြေမှာလမ်းလျှောက်ရင်းပန်းနံ့တွေမွှေးနေတဲ့လေအေးအေးတိုက်လာတဲ့အခါခံစားရတဲ့ အရသာက မြန်မာပြည်မှာခံစားခဲ့ရတာနဲ့တထပ်ထဲပါပဲ။ဘိုကတော်မျက်ခုံးပင်တွေ၊နွယ် သာကီပင်တွေ၊ ကတ္တီပါသီးပင်တွေ၊ရွက်လှဂမုန်းပင်တွေကိုမြင်နေရတာကလည်း မြန် မာပြည်မှာနေရသလိုပါပဲ။
အဲဒါတွေအပြင်နယူးအော်လန်းဟာ မြန်မာပြည်နဲ့ဘယ်လောက်တူလိုက်သလဲဆိုတော့ ၂၀၀၅ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ တနာရီမိုင် ၁၅၀နှုန်းရှိတဲ့ကက်ထရီနာဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခံလိုက်ရတာပါပဲ။ကက်ထရီနာမုန်တိုင်းကြောင့်လူပေါင်း၂၀၀၀၀န်းကျင်သေ
ဆုံးပြီးလူပေါင်း ၇ သိန်းလောက်အိုးအိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မုန်တိုင်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးစုစုပေါင်းကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၁ ဘီလီယံဖိုးရှိ ခဲ့ပါသတဲ့။
ကျမတို့ Writers-in-Motiom အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၁ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှာ နယူးအော်လန်း၊ Loyola တက္ကသိုလ်ကပါမောက္ခလဲဖြစ် စာရေးဆရာတစ်ယောက်
လဲဖြစ်တဲ့ John Biguenet နဲ့တွေ့ရပါတယ်။ ဂျွန်က ကက်ထရီနာမုန်တိုင်းတိုက်ခဲ့စဉ် ကသူတို့ရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ရတာတွေကို အကျယ်တ၀င့်ပြောပြပါတယ်။ ဘုရ်ှအစိုးရရဲ့
ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လူတွေဟာဆေးဝါးမရှိပဲနေခဲ့ကြရတယ်။မာကျူရီ ဓါတ်တွေကရေပိုက် လိုင်းတွေထဲပျံ့နှံ့ဝင်ရောက်ကုန်လို့ လူတွေမှာသောက်ရေအခက်အခဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ကျောင်းတွေ၆ ပါတ်ကနေ ၇ ပါတ်အထိပိတ်တယ်။ ကလေး ၂၅၀၀ဟာကျောင်းတက် ဖို့လမ်းတွေပေါ်မှာ စောင့်နေခဲ့ရတယ်လို့သူကစိတ်လှုပ်ရှုားစွာပြောခဲ့တယ်။
အဲဒီနေ့နေ့လည်ပိုင်းမှာပဲ ကျမတို့ဟာကက်ထရီနာမုန်တိုင်းအဓိကအတိုက်ခံ လိုက်ရတဲ့နေရာကို Disaster Bus Tour နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့ကားပေါ်မှာ ဂိုက်အဖြစ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကကားလမ်းဘေးတဖက်တချက်ကအိမ်တွေ ကိုညွှန်ပြပြီးတချို့အိမ်တွေဟာခုထိပြန်မဆောက်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်း ထပ်ကာထပ် ကာပြောပါတယ်။ ၂၀၀၅ မှာမုန်တိုင်းဒါဏ်ခံစားခဲ့ရသူတွေရဲ့နယ်မြေတွေဟာ ကျမ အတွက်တော့ ဘယ်လိုဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့ခံစားမှုကိုပေးနေပါတယ်။ အိမ်တွေကစံနစ် ကျသပ်ရပ်နေတယ်။ ပြောရရင် ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာအတော်ချမ်းသာတဲ့သူတွေမှနေ
အောက်မှာကုလားထိုင်လေးတွေချပြီးဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြတယ်။ကလေးတွေကအိမ်ရှေ့ လူသွားလမ်းမှာစက်ဘီးစီးလို့။Tourကားတစ်စီးလာတိုင်းအိမ်ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့သူတွေ က လက်ပြနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ ကားပေါ်ကဂိုက်အမျိုး သမီးကြီး ‘ ဟောဟိုအိမ်ရှေ့ ကအဖြူရောင်တီရှပ်နဲ့လက်ပြနေတဲ့သူရဲ့အဖေနဲ့သူ့ရဲ့မြေးမလေးကကက်ထရီနာ
နေတဲ့အိမ်မျိုးတစ်လုံးလောက်တွေ့ရင်‘ကြည့်ပါဦးဒီအိမ်ဆိုခုထိပြန် မဆောက်နိုင်သေး ဘူး’ လို့ပြောတယ်။ ကားပေါ်ကလူတွေက စုတ်သပ်လို့။
ကျမကတော့ကက်ထရီနာမွှေနှောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရွေ့လျားနေတဲ့ကားပေါ်ထိုင်ပြီး လူကတုတ်တုတ်မလှုပ်ငြိမ်သက်နေသလောက် စိတ်ထဲမှာအတွေးတွေဗြောင်းဆန်နေ ပါတယ်။ ကျမ၀ိဥာဉ်ဟာ မြန်မာပြည်က နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းတိုက်ခံရလို့ သောက်စရာ
ရေတောင်မရှိခဲ့ကြရှာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ မြေကိုရောက်နေပါ တယ်။ မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီး တစ်ပါတ်ကျော်မှာ ဒေးဒရဲမြို့နယ်ထဲကိုဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့သွားတော့ လူပေါင်း တစ်သိန်းသုံးသောင်းလောက်မုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာမို့ မြစ်ထဲမှာလူသေ
အလောင်းတွေကမျောနေဆဲ။ အပုပ်နံ့တွေကဟောင်းဟောင်းထနေလို့။ ကျမတို့ကယ် ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဦးတည်သွားနေတဲ့ ရွာကလေးထဲကိုဝင်ရမယ့် ချောင်းကျဉ်းလေးရဲ့ အ၀မှာ လူသေအလောင်းတစ်ခုကမှောက်လျှက် ကားဟားကြီးပိတ်ဆို့ နေတယ်။ ကျမရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ထဲကသူငယ်ချင်းတွေက၀ါးလုံးရှည်ရှည်နဲ့ထိုးပြီးအလောင်း
ကိုဖယ်ထုတ် လမ်းရှင်း တော့အလောင်းရဲ့ အသားတွေကပဲ့ကျကုန်တယ်။
ကျမတို့စားစရာ၊ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ကူညီဖို့ရောက်လာတာမြင်တော့ ရွာခံဒုက္ခ သည်တွေကငိုရင်းထိုင် ကန်တော့ကြတယ်။ မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး ၈ရက်အတွင်းမှာကျမ တို့ က ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ကူညီကယ်ဆယ်သူ တွေပါတဲ့။ ရွာကရေငံဝင်တဲ့ရွာ။ ရွာရဲ့ရေချိုသောက်ရေတွင်းထဲကိုရေငံအပါအ၀င် လေနဲ့လှိုင်းနဲ့အတူလူသေကောင်
တွေဝင်လာတော့ တစ်ရွာလုံးသောက်စရာရေတောင်မရှိကြရှာဘူး။ ၈ ရက်လုံးလုံး စားစရာမပြောနဲ့ သောက်ရေတောင်မရှိပဲ သူတို့ဘယ်လိုနေခဲ့ကြသလဲ ကျမမစဉ်းစား ချင်ဘူး။
ဂျွန်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့စကားဝိုင်းမှာ ဂျွန်ကပြောတယ်။ “မုန်တိုင်းက အင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တယ်။အကူအညီတွေကိုကြာသပတေးနေ့မှစရတယ်”တဲ့။ မုန်တိုင်း တိုက်စဉ်ကသူ့အိမ်ထဲရေတွေဝင်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့စာအုပ်၃၀၀၀ ၀န်းကျင်နဲ့တခြားမုန် တိုင်းတိုက်ပြီးစအခြေအနေတွေကိုဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးကွန်ပျူတာဆလိုက်ရှိုးနဲ့ပြတယ်။ ဂျွန်ဟာမုန်တိုင်းကာလနဲ့မုန်တိုင်းလွန်ကာလအခြေအနေကိုစိတ်ခံစားမှုအပြည့်နဲ့ပြော
ပြနေ တယ်။သူ့ဘ၀မှာအဲဒီကာလ လောက်စိတ်ညစ်ခဲ့ရတာမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။သူ့ရဲ့ ကက်ထရီနာအကြောင်းပြောပြဖို့စိတ်ထက်သန်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနေရာမှာကျမမြင်ခဲ့ရ တဲ့မျှော်လင့်တိုးလျိုးရိပ်တွေပါပေမယ့်ဖျော့တော့တဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကိုအစားထိုးကြည့်နေ မိတယ်။
အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ မေလ ၁၅ရက်နေ့။ ဆိုက်ကလုံးတိုက်ပြီး ၁၂ရက်
မြောက်နေ့။ ထုံးစံအတိုင်း ကျမတို့အဖွဲ့ရဲ့ ၃ ရက်တစ်ကြိမ်ခရီးစဉ်တွေထဲကတစ်ခု
အဖြစ်ဒေးဒရဲမြို့နယ်ထဲကနောက်ထပ် ရွာတစ်ရွာကို ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ
ပေးဖို့သွားတဲ့ခရီးစဉ်တွေထဲကတစ်ခုပေါ့။ ကျမတို့အဖွဲ့ဝင်တွေက ဆန်အိတ်၊ အာလူး အိတ်၊ ဆေးဝါးနဲ့ အ၀တ်အထည်တွေ ကိုကားထဲကနေမော်တော်ပေါ်သယ်ချနေကြ ချိန်မှာ ဖျော့တော့တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဖွာယာကျဲတဲ့ဆံပင်တွေနဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီးလေး ကျမနားကိုမ၀ံ့မရဲရောက်လာတာ။ ‘အစ်မတို့ ဘယ်သွားကြမလို့လဲ’ လို့မေးတယ်။ ကျမတို့ သွားမယ့်ရွာနံမည်ပြောလိုက်တော့ ‘ ဒီပစ္စည်းတွေက ဒုက္ခသည် တွေကို ကူညီဖို့လားတဲ့။’ ကျမကဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ ‘အစ်မတို့ကဘယ်ဌာနကလဲ’ တဲ့။ ဘယ်ဌာနကမှမဟုတ်ဘူး၊အစ်မတို့က ပည်တွင်းပြည်ပကသူငယ်ချင်းတွေဆီမှာအလှူ ခံပြီး ဒုက္ခသည်တွေဆီကိုယ်တိုင်သွား၊ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကို ဒုက္ခသည်တွေ လက်ထဲအရောက်ကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးကြတာ’ ဆိုတော့ အမျိုးသမီးလေးမျက်လုံးမှာ အံ့သြရိပ်တွေက မဖုံးနိုင်မဖိနိုင် စွန်းထင်းလာတယ်။ ခဏလောက်ကြာမှ သူကခပ်ရွံ့ရွံ့
ပြောတယ်။ ‘ ကျမတို့ရွာကိုလည်းလာလှူပါလား အစ်မရယ်’တဲ့။ ‘ညီမတို့ဘယ်က အလှူမှမရသေးဘူးလား’ ဆိုတော့ အားမရှိတဲ့အသံနဲ့ ‘ တစ်ခါတော့ရပါတယ်’ တဲ့။ ‘ဘာတွေရလဲ’ လို့ကျမကစိတ်ထက်သန်စွာမေးမိတော့ အမျိုး သမီးလေးပြန်ပြောတဲ့ စကားကြောင့် ကျမပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ပြီးဘာသံမှမထွက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရ တယ်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့၂ ရက်က ဟယ်လီကော်ပတာပေါ်ကနေရေသန့်ဗူးတွေကျဲချတယ်။ ကျမတို့မှာလုလိုက်ရ တာအမောကိုဆို့ရောအစ်မရယ်။ ရေလေးတစ်ပုလင်းရတော့
မောလွန်းလို့မော့သောက်လိုက်တာ တစ်ခါထဲနဲ့ ကုန်တာပဲ။ ဟယ်လီကော်ပတာပြန် သွားတော့ ကျမတို့ရတဲ့ရေဗူးတွေကိုရေကြည့်ကြတယ်လေ။ ကျမတို့တစ်ရွာလုံး အတွက် စုစုပေါင်းရေသန့်ဗူး ၂၃ ဗူးပစ်ချပေးသွားကြတယ်လေ ”တဲ့။
ကျမအတွေ့အကြုံတွေကို ဂျွန်အပါအ၀င်ကျမရဲ့ ခရီးအတူထွက်ဖက် မိတ်ဆွေ စာရေးဆရာတွေကို မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အမေရိကန်ဟာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကလူတွေ လာခွင့်ရဖို့၊ ပညာသင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ချမ်းသာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ ကျမတို့
တွေငတ်မတတ်ဆင်းရဲတဲ့နေရာ။ ပညာရေး ကျန်းမာရေးအပါ အ၀င်အဖက်ဖက်က ဖွံ့ဖြိုးမှု အနှေးကွေးဆုံးတိုင်းပြည်။ လူ့အသက်တွေနဲ့ရင်းရတဲ့ဆင်တူအခြေအနေတစ်ခု မှာ အစစအရာရာကွဲပြားခြားနားတဲ့တိုင်းပြည်နှစ်ခုကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တုန့်ပြန်ပုံက ဘာကြောင့်တစ်ထပ်ထဲနီးပါးကျနေတာလဲ။ အဲဒီထပ်တူနီးပါးကျမှုတွေရဲ့နောက်ကွယ် ကိုကြည့်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ အာဏာနဲ့လည်ပတ်စေသောတုန့်ပြန်မှုတွေရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အဖြေတစ်ခု တွေ့နိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့။
ပေမယ့် ကျမအဲဒီအတိုင်းတကယ်ပဲ တွေးခဲ့မိပါတယ်။